Adɛn Nti Na Daa Na M’ano Akɔpɛ Asɛm Abrɛ Me Yi? | Mmabun Bisa Sɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mexican Sign Language Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zulu
“Ɛtɔ da a mitumi hwɛ me kasa yiye, nanso ɛtɔ mmere bi nso a ɛte sɛ nea mekasa a minnwen ho no!”—James.
“Sɛ biribi hyɛ me so na minhu nea menyɛ a, mekasa a minnwen ho. Me koro yi ara sɛ biribiara nhyɛ me so nso a, mekasa dodo. Enti mɛka pa ara, daa m’ano kɔpɛ asɛm brɛ me.”—Marie.
Bible ka sɛ: “Tɛkrɛma no yɛ . . . ogya” na, ‘ogya ketewaa tumi hyew kwae mũ!’ (Yakobo 3:5, 6) Ɛyɛ a, nsɛm a epue fi w’anom kɔpɛ asɛm brɛ wo anaa? Sɛ saa a, ɛnde asɛm yi betumi aboa wo.
Adɛn nti na meka nea mempɛ sɛ meka?
Sɛnea wobɛhwɛ wo kasa yiye
Mfomso wɔ yɛn ho. Bible ka sɛ: “Yɛn nyinaa di mfomso mpɛn pii. Sɛ obi nni mfomso wɔ kasa mu a, ɛkyerɛ sɛ saa onipa no yɛ pɛ.” (Yakobo 3:2) Esiane sɛ bɔne wɔ nnipa nyinaa ho nti, yɛnam a yetumi hwe ase. Saa ara nso na yɛrekasa a, yetumi ka nea yɛmpɛ sɛ yɛka.
“Esiane sɛ bɔne wɔ me ho nti, sɛ meka sɛ metumi ahwɛ me kasa yiye bere nyinaa a, na meredaadaa me ho.”—Anna.
Kasa bebrebe. Bible ka sɛ: “Mfomso mpa ɔkasa dodow mu.” (Mmebusɛm 10:19) Sɛ woyɛ obi a wokasa pii na wonyɛ aso ntie afoforo a, anhwɛ a wobɛka asɛm a yɛnka, na ebetumi ahaw afoforo.
“Sɛ nkurɔfo hyia a, wɔn a wonim ade pa ara no ntaa nkasa pii. Wohwɛ Yesu sɛɛ a, na onim ade sen obiara wɔ asase so ha, nanso ɛtɔ da a, na ɔyɛ dinn.”—Julia.
Nsɛm a wɔka de twiw afoforo. Bible ka sɛ: “Ɛwɔ nea otu nsɛm bumbum sɛ nkrante a ɛwowɔ.” (Mmebusɛm 12:18) Nsɛm a wotu no bumbum no, baako ne nsɛm a wɔka de twiw afoforo; ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ yaw a wɔka de bu afoforo animtiaa. Ebia obi a ɔka nsɛm de twiw afoforo no bɛka sɛ, “Ɛnyɛ agorɔ kɛkɛ na na meredi!” Nanso nsɛm a wɔka de bu afoforo animtiaa nyɛ agodi. Bible ka sɛ yenyi ‘kasatia ne adebɔne biara mfi yɛn mu.’—Efesofo 4:31.
“Me ho yɛ anika, na ɛyɛ a mepɛ sɛ nkurɔfo serew, enti wobɛhwɛ na maka asɛm bi ama atwiw obi. Ɛno na mpɛn pii ɛkɔfa asɛm brɛ me no.”—Oksana.
Sɛnea wumia pɛpsodɛnt a, worentumi mpia nkɔ mu bio no, saa ara na nsɛm a yɛka te; sɛ yenya ka a, yɛrentumi ntwe nsan
Ɛnyɛ mmerɛw sɛ wobɛhwɛ wo kasa yiye, nanso Bible mu afotusɛm betumi aboa wo. Wo de, susuw nhwɛso a edidi so yi ho.
“Momma mo nsɛm ntena mo koma mu, . . . na monyɛ komm.”—Dwom 4:4.
Ɛtɔ da a, nea eye pa ara ne sɛ wobɛyɛ komm. Ababaa bi a ne din de Laura ka sɛ, “Sɛ me bo fuw a, sɛnea mete nka no, ɛbɛyɛ kakra no na mente nka saa bio. Sɛ me bo dwo a, ɛyɛ a m’ani gye pa ara sɛ manka nea na anka mepɛ sɛ meka no.” Sɛ wohome asɛm bi so bɛyɛ anibu kakraa bi mpo a, ebetumi aboa wo na woanka nea yɛnka.
“Ɛnyɛ asõ na ɛsɔ nsɛm hwɛ sɛnea dodom ka aduan hwɛ no?”— Hiob 12:11.
Sɛ wode nsɛmmisa a edidi so yi susuw asɛm biara a wopɛ sɛ woka ho yiye a, ebetumi aboa wo na w’ano ankɔpɛ asɛm ammrɛ wo. Asɛm a worebɛka no, bisa wo ho sɛ:
Ɛyɛ nokware? Ɛde asomdwoe bɛba? Ɛho hia?—Romafo 14:19.
Sɛ me na obi kaa saa asɛm no kyerɛɛ me a, anka mɛte nka sɛn?—Mateo 7:12.
Ɛbɛkyerɛ sɛ mede nidi rema afoforo anaa?—Romafo 12:10.
Saa bere yi na ɛsɛ sɛ meka anaa?—Ɔsɛnkafo 3:7.
“Mumfi ahobrɛase mu mmu afoforo sɛ wɔkyɛn mo.”—Filipifo 2:3.
Afotusɛm yi bɛboa wo ama woanya afoforo ho adwempa. Wunya afoforo ho adwempa nso a, ɛbɛboa wo ama woadwen ansa na woakasa. Sɛ ɛkɔba sɛ woka nea yɛnka ma ɛhaw obi mpo, na wowɔ ahobrɛase a, wobɛpa kyɛw ntɛm ara! (Mateo 5:23, 24) Ɛno akyi no, bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ wo kasa yiye bere foforo.
“Sɛ yɛrebɔ nkɔmmɔ na m’ani gye boro so a, ɛyɛ a metaa ka nsɛm a minnwen ho. Nanso sɛ mitumi home me kasa so bɛyɛ anibu du de susuw sɛnea me kasa no bɛka afoforo anaa sɛnea ɛbɛboa afoforo ho a, ɛma mitumi hwɛ me kasa yiye.”—Taylor.
“Sɛ obi ka asɛm bi ma ɛhaw wo a, ɛyɛ papa sɛ wubesusuw nea ɛma ɔkaa saa no ho. Mpɛn pii no, wobɛhwɛ na wannwen ho, enti wubetumi abu w’ani agu so. Ɛtɔ da nso a, nea ɔkae no anyɛ wo dɛ nanso ebia na nokwasɛm bi wom. Ɛba saa a, ɛsɛ sɛ moka ho asɛm na musiesie mo ntam wɔ odwo so.”—Brandon.
“Sɛ asɛm a yɛbɛka ama ahaw obi no amma yɛn tirim a, ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛka nea yɛnka. Ɛtɔ da a, ɛsɛ sɛ yɛsesa yɛn adwene wɔ nsɛm bi ho ne sɛnea yehu afoforo. Yɛyɛ saa a, yɛrenkɔka biribi a ɛbɛhaw wɔn.”—Jessica.
Share Share Adɛn Nti Na Daa Na M’ano Akɔpɛ Asɛm Abrɛ Me Yi?